Guddida Doorashooyinka Qaranka Somaliland oo Shaaciyey Inay Dhamaatay Diwaan-galintii Codbixiyyaasha ee Gobolka Maroodi-jeex – WARSOOR
Guddida Doorashooyinka Qaranka Somaliland oo Shaaciyey Inay Dhamaatay Diwaan-galintii Codbixiyyaasha ee Gobolka Maroodi-jeex
Hargeysa – (warsoor) – Komishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland ayaa shaaciyey in diwaan-galintii codbixiyayaasha ee gobolka Maroodi-jeex ay dhamaatay 28-kan May 2016, loona gudbi doono gobolka Sanaagaa.
Shirkan jaraa’id oo ay ka soo qayb-galeen gudoomiyaha gobolka Maroodi-jeex, wakiilo matalaayey asxaabta saddex xisbi qaran iyo xubno ka mid ah komishanka doorashaooyinka Somaliland.
Komishanka oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xarunta NEC ee magaaladda Hargeysa ayaa war-fidiyeenadda u sheegay in maanta ay si rasmi ah u dhamaatay diwaan-galintii gobolka Maroodi-jeex.
“Waxaa inoo soo gabo-gaboobay gobolkii Afraad, wuxuu ku soo gabogoobay si nabad-galyo ah, wuxuu ku soo gabogaboobay si raynrayn ah, Ilaahaybaana mahadda koowaad iska leh”, sidaasi waxaa yidhi Eng. Cabdiqaadir Warsame Iimaan.
Gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka ayaa sheegay in diwaan-galinta la hakin doono inta lagu guddo jira bisha barakaysan ee Ramadaan.
Gudoomiyaha Gobolka Maroodi-jeex Md. Jeeni-yare ayaa ku bogaadiyey komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland hawsha diwaan-galinta ee soo dhamaystireen. Waxaanu dhanka kale wuxuu ugu duceeyey gudoomiyayaasha goboladda kale ee hadda diwaan-galintu ka bilaabmayso inuu Ilaahay u fududeeyo.
Diwaan-galinta codbixiyayaasha ee gobolka Maroodi-jeex ayaa ka bilaabantay 28 April 2016, ka dib markii muddo hal bil ah la hakiyey intii lagu jiray gurmadka abaaraha dalka ku dhuftay. Diwaan-galinta ayaa la sheegay in isdiwaan-galiyeen dad tiro badan inkasta oo aan si rasmi ah loo shaacin tiradda guud ahaan iska diwaan-galisay gobolka Maroodi-jeex oo gobolka ugu dadka badan Jamhuuriyadda Somaliland.
“Madaxweynaha JSL Md. Axmed Maxamed Siilanyo waa hogaamiyeyaashii taariikhdii madoobayd ee Somaliland iyo Itoobiya bedelay, ee keenay nabada..” Mr. Maxamuud Xaashi Cabdi
Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada oo xilkii u kala wareejisay Agaasimihii Hore Ee Maamulka Madaxtooyada iyo Agaasimaha Cusub ee Bedelay